Karisma Kapoor iyo Sunny Doel oo loo haysto fal-dembiyeed ay galeen iyaga oo film jilaya!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Karisma Kapoor iyo Sunny Doel oo loo haysto fal-dembiyeed ay galeen iyaga...
Karisma Kapoor iyo Sunny Doel oo loo haysto fal-dembiyeed ay galeen iyaga oo film jilaya!!
(Hadalsame) 24 Nof 2021 – Xiddigga caanka ah ee Bollywoodka Hindiya, Sunny Doel oo ay aad u yaqaannaan Soomaalida filimada daawata ayaa soo sameeyay rogaal celin, waxaana uu ku mashquulsan yahay filimkiisa cusub ee Apne 2 oo la filayo inuu soo baxo sanadka foodda nagu soo haya.
Muxuu ahaa kiisku?
NDTV Sunny Deol iyo Karisma Kapoor
Previous articleDHEGEYSO: Sweden oo ay ka dhacday taariikh aan abid horay u dhicin
Next articleJabuuti oo dayuuraddii 2-aad oo rakaab ah ka heshay dalka Shiinaha + Sawirro